Qodobkeeduna waxa uu sababayaa in dadka ay ka walaacaan qowmiyadda dhalinyaradan Ingiriiskan ah ee 22 - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD »Qodobkeeduna wuxuu ku riixayaa dadka in ay su'aal ka keenaan qowmiyadda dhalinyaradaan Ingiriis ah ee 22
Qodobkeeduna wuxuu ku riixayaa dadka in ay su'aal ka keenaan qowmiyadda dhalinyaradaan Ingiriis ah ee 22
Maalmahan, haddaad rabto midab wanaagsan bedslooma baahna inaad qorraxda sii joogtid saacado. Dadka qaarkood waxay ku noqdaan kuwo ku tiirsan xayndaabyada iyo qurxinta alwaaxda oo kala duwan oo ay si fudud u lumiyaan muuqaalkooda dabiiciga ah.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on Nov 23, 2014 at 4: 23am PST
Hannah Tittensor, 22, oo ka socota Belfast waa taageere taageera solarium. Ardaygu weli wuu ka xishoodnaa maqaarka cirridka oo bilaabay isticmaalka buufiyo iyo kiriimyo kala duwan si loo helo midab madow.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on Jan 6, 2015 at 12: 55pm PST
Dareenka Hannah ee xayiraadaha ayaa bilaabay 2015 ka dib markii uu ka soo laabtay fasax Turkiga ah. Gabadhu waxay jeceshay midabka maqaarka cusub oo aad u badan oo ay go'aansatay in ay hayso saameyntaas.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on May 4, 2018 at 7: 20am Magaadle
Tittensor wuxuu bilaabay inuu galo saddex jeer toddobaadkii. Waxaa intaa dheer, waxay bilaabay inay isku durto Melanotan - daroogo sharci darro ah - si loo beddelo midabka maqaarkeeda. Hannah ayaa leh:
Gabdhaha kale ma noolaan karaan iyagoo aan ciriiri lahayn, oo aanan ku noolaan karin iyada oo aan la saarin.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on Mar 11, 2018 at 5: 39am PDT
Nidaamka Tittensor ee dhowr sano ayaa maqaarkeeda madow ka dhigtay in ay badanaa u qalantay gabadh madow ah.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on May 20, 2018 at 3: 53am Magaadle
Hannah waxay ka warqabtaa in sariiro culus ay si xun u saameeyaan caafimaadkaaga, laakiin waxay aaminsan yihiin khatar aad ayuu u buunbuuniyay. Waxay sidoo kale sheegtay in ay si joogta ah u hubiso joogitaanka maqaarka maqaarka.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on Feb 17, 2019 at 6: 21am PST
Tittensor wuxuu si joogta ah ula wadaagaa sawirkiisa Instagram, laakiin cid kastaa way ku raacsan tahay dareenkiisa. Dad badan ayaa dhaleeceeyay hiwaayadiisa iyo xitaa ku eedeeyeen cunsuriyad.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on Sep 16, 2018 at 7: 32am PDT
Gabadha ayaa sheegeysa in ay adagtahay in la qiimeeyo sida mugdigeedu yahay madow, iyada oo maalin kasta la arko iyada oo loo isticmaalayo muraayadda muraayadda.
Boostada Hannah Winifred Tittensor 👽 (@dirtyyhippie_) on Mar 3, 2019 at 6: 18am PST
Maxaad u maleyneysaa hiwaayadda Hannah? Fikradaada kula wadaag faallooyinka!
Daaweynta cagaarshow B: waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.
DR Congo: Carin Ilunga oo qurux badan, gabadha ra'iisul wasaaraha ah, xarunta dhexe ee muranka ...
Helitaanka isgaarsiinta caadiga ah iyo tiknoolajiyadda caadiga ah oo ku baaqeysa in la tirtiro codsiyada VPN - VIDEO
Burkina Faso: Cherif Sy, oo ah Sankarist ee difaaca - JeuneAfrique.com
Miisaanka oo dhan: waa halkan roodhida dhadhanka leh ee dufanka gubtay shukulaatada - SANTE PLUS MAG
PSG - PSG: Indha indheeyayaal, Guuldarro ... Guy Roux oo ku dagaalamaya Buffon - FOOT 01
Cameroon - Job Offers197
Congo - Brazzaville - Fursadaha Shaqada17
aan caadi ahayn20
DADKA & LIFESTYLE4,011
Daawooyinka dabiiciga ah60
DIB U EEGID27
DIB U EEGID AFRICAN PRESS93
Video dheeraad ah960